Photosynthesis: ihe ọ bụ, ụdị, otú o si arụ ọrụ na mkpa ya | Green Renewables
Portillo nke German | 10/11/2021 09:58 | Gburugburu
La fotoynthesis ọ bụ usoro kemịkal dị mkpa maka ndụ na mbara ala anyị dịka anyị si mara ya. Nke a bụ ụzọ osisi ka na-esi emepụta carbon dioxide n'ikuku na-abanye oxygen. Ọ bụ ekele oxygen a na ihe niile dị ndụ nwere ike ibi n'ụwa.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe photosynthesis bụ, ihe bụ àgwà na mkpa ya.
1 Gịnị bụ photosynthesis
2 Ụdị photosynthesis
3 Uru nke osisi maka mbara ala
4 Ụmụ anụmanụ na photosynthesis
5 Ọdịnihu nke mbara ala ụwa
Gịnị bụ photosynthesis
Igbukpọsị oke ọhịa ugbu a emela ka ikuku carbon na-adị ntakịrị na mpụta ikuku griin, na-eduga okpomoku nke ikuku na mgbanwe ihu igwe kariri oke. N'ọnọdụ mgbanwe ihu igwe, mkpa nke photosynthesis na-abawanye.
Ọ bụ otu n'ime usoro biochemical kachasị mkpa n'ụwa n'ihi na ọ na-agụnye mmepụta nke ihe ndị na-edozi ahụ na-echekwa ike ọkụ nke anyanwụ n'ime ụmụ irighiri ihe bara uru (carbohydrates). N'ihi nke a, aha ya sitere na okwu Grik foto, "ìhè" na "mgbakọta", "nchịkọta." Enwere ike iji ụmụ irighiri ihe ndị a na-emekọrịta ihe dị ka isi iyi ike kemịkalụ iji kwado usoro dị mkpa dị ka iku ume cellular na metabolism.
Maka osisi iji photosynthesize, ọnụnọ chlorophyll dị mkpa, chlorophyll bụ a pigmenti nke na-enwe mmetụta nke ìhè anyanwụ na bụ pigmenti na-enye osisi a pụrụ iche agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ụdị pigmenti a dị na chloroplasts, nke bụ ihe a na-ahụkarị n'ụdị cell nke nha dị iche iche na sel osisi.
Osisi mmiri na terrestrial nwere ike photosynthesize, ma ụdị osisi ndị ọzọ dị ka ferns, algae, na ụfọdụ nje bacteria na-adị ndụ nwekwara ike photosynthesize. Iji mee nke a, ha nwere ụdị abụọ:
Oxygenic photosynthesis, Ọ na-emepụta sugars bara uru maka osisi, na-eri carbon dioxide (CO2) ma na-emepụta ihe sitere na oxygen (O2). Ụdị a dị mkpa maka iku ume n'ihi na ọ bụ ihe megidere mgbanwe gas.
Photosynthesis anoxygenic, ụdị photosynthesis nke na-adịghị emepụta oxygen (O2), kama na-eji ìhè anyanwụ na-agbaji molekul hydrogen sulfide (H2S). N'ụzọ dị otú a, ọ na-ahapụ sọlfọ n'ime gburugburu ebe obibi ma ọ bụ na-akwakọba ya na nje bacteria nwere ike ibu sọlfọ.
Mgbanwe gas nke na-eme n'oge photosynthesis dị oké mkpa maka gburugburu ebe obibi na ndụ. Nke a bụ n'ihi na ọ na-enye ohere mmepụta na mgbasa nke ihe ndị dị ndụ na nhazi nke ihe ndị na-emepụta ihe.
Uru nke osisi maka mbara ala
Photosynthesis bụ usoro neuralgia nke ndụ n'ụwa. N'ihi ọkụ, osisi na-ejide carbon dioxide (CO2) ma hapụ oxygen n'ụbọchị. N'abalị, ọnọdụ dị iche, ha na-ejide oxygen ma hapụ carbon dioxide. Usoro a na-akwalite ndụ n'ụwa site n'inye anyị ikuku oxygen anyị kwesịrị iku ume.
Ha na-edobe nguzozi nke ikuku ikuku. N'ihi photosynthesis, ikuku oxygen na-eri na iku ume na combustion nwere ike dochie ya. N'ụzọ dị otú a, a na-ezere mmụba nke carbon dioxide.
Ha bụ isi nri nke ọtụtụ ihe dị ndụ. Usoro ndụ na-amalite site na osisi n'ihi na ha bụ isi iyi nri maka ihe ndị dị ndụ (n'ụzọ ụfọdụ) na ihe ndị dị ndụ dị iche iche bi n'ụwa.
Ha nwere akụrụngwa ọgwụ: Kemgbe oge ochie, a na-enweta ọtụtụ ọgwụ ndị anyị na-eji eme ihe ozugbo site na osisi. E si na ya wepụta ọtụtụ kemịkalụ ma jiri ya na-emepụta ọgwụ dị iche iche.
A na-eji ha eme ihe eji arụ ụlọ. Osisi ma ọ bụ achara bụ ihe atụ ụfọdụ. A pụkwara iji ha na-emepụta ike site na ọkụ ọkụ ma ọ bụ mee ihe dị ka akwụkwọ.
Chebe ala. Nbibi nke ihe ndị dị ndụ (karịsịa osisi) na-enye ohere ka ala nweta nri ndị dị mkpa maka ọrụ ugbo.
Ụmụ anụmanụ na photosynthesis
Anyị niile maara na photosynthesis bụ usoro metụtara osisi, nke na-eme ka ha dị iche na anụmanụ. Agbanyeghị, enwere anụmanụ nwere njikọ chiri anya nwere ike ịme usoro a.
Ihe atụ nke a bụ Elysia Chlorotica, nke a na-akpọkarị emerald slug. Ọ bụ otu n'ime anụmanụ ndị kasị dị ịtụnanya n'ụwa ma na-ebikarị North America, karịsịa n'ụsọ oké osimiri Atlantic. Emerald slug bụ akwụkwọ nwere ụdị akwụkwọ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ miri emi, nke dị iche na ntụpọ ya na-acha ọcha ma ọ bụ ọbara ọbara. Ọ dị nnọọ ka akwụkwọ osisi ọ bụla, nke na-eme ka camouflage bụrụ ngwá agha kasị mma, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-apụghị ịhụ anya n'anya ndị na-eri anụ ya.
Otú ọ dị, njirimara nke anụmanụ a bụ ikike photosynthesis ya. Emerald slugs na-eri nri na algae na-acha odo odo, na-ewepụ chloroplasts na ha ma tinye ha n'ime sel nri nri. Nke a na-enye ya ike ịmịpụta ìhè anyanwụ dị ka ihe ọkụkụ n'oge usoro uto. A na-akpọ usoro a kleptoplasty na ọ nwere ike were ọnwa 9 ruo 12.
Ụdị anụmanụ ọzọ metụtara photosynthesis bụ coral. Ha na-eme ya ekele maka algae na coral. Ọ bụ ezie na coral na-echebe algae, ha na-enye ha nri, nke n'aka nke ya na-enyere ha aka ịgbatị.
Ọdịnihu nke mbara ala ụwa
E hiwere fotosynthesis dị ka usoro ebumpụta ụwa nke nwere ike idowe nguzozi nke mbara ala anyị na ụdị dị iche iche nke ihe ndị dị ndụ n'ime ya. Iji hụ na ọdịnihu nke mbara ala, a ga-echekwa akpa ume gị. Ọ bụrụ na ebe dị ka Amazon ka na-emebi, mgbanwe ihu igwe ga-akawanye njọ nke ukwuu ma tinye ndụ anyị n'ihe egwu.
Idebe ihe ọkụkụ anyị n'ọnọdụ dị mma pụtara inye aka na mmepe nke ndụ. Osisi anyị bụ maka idobe nguzozi nke ikuku ikuku, mana ha bụkwa isi nri nke ọtụtụ ihe dị ndụ. Usoro ndụ na-amalite site na osisi, ihe ọ bụla anyị na-eri, ma anụmanụ ma ọ bụ osisi. nwere njikọ ụfọdụ na ihe ndị a e kere eke.
Ruo ọtụtụ nde afọ, ihe ọkụkụ na-eme usoro a, nke na-eme ka ikuku oxygen na-ejupụta na ikuku oxygen, si otú ahụ na-akpụ oyi akwa ozone. E wezụga ya, ụzarị anyanwụ apụghị ime ka ndụ dị ndụ na mbara ala anyị.
Na mgbakwunye, osisi na-echebe ịdị mma nke ala anyị. Ya mere, igbutu osisi bụ nnukwu nsogbu kpatara nsogbu ihu igwe iji belata ikike nke osisi na osisi na-amịkọrọ carbon dioxide. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịgbanwe ọnọdụ a na-enye nsogbu, mgbanwe ihu igwe ga-emesị gbanwee ndụ nke gburugburu ebe obibi anyị ma mee ka mbara ala anyị ghara ibi ndụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere photosynthesis na mkpa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Photosynthesis
Ụgbọ ala hydrogen